Isho ukuthini i-Afrika ebumbene entsheni kwezomnotho - Bayede News
Sekuyisikhathi eside abaholi abaningi esebeke babusa emazweni ahlukene kuleli zwekazi i-Afrika behlaba ikhwelo le-Afrika ebumbene. Kuze kube namuhla imizamo eminingi yokuphumelelisa i-Afrika ebumbene kwezohwebo ibukeka isengumnyama ongenafu. Ziningi izingqinamba ezenze lesi sifi so singaphumeleli.
Abanye bathi yingoba i-Afrika yahlukaniswa yilabo ababeyicindezele phambilini. Ngisho noma amazwe amaningi ase-Afrika esethola inkululeko kepha ugcobho lwalawo mazwe ayengababusi noma abacindezeli bawo lusabonakala kuze kube namhlanje. Umzekelo nje, amazwe ayecindezelwe yiFrance akhuluma isiFrentshi okuwulimi lwase-France kanti lawo afana neNingizimu Afrika ayebuswa yiNgilandi akhuluma iSingisi, kanjalo kanjalo. Lesi simo sibukeka siwuqhekeko oluyohlala ingunaphakade e-Afrika.
Umbuzo omkhulu uthi uma sikhuluma izilimi ezahlukene singekwazi yini ukuhwebelana? Engani siyahwebelana namanye amazwe aphesheya kwezilwandle akhuluma izilimi ezahlukile kunalezo ezikhulunywa ekhaya nokusho ukuthi ukwahluka kwezilimi akumele kwenze ukuhwebelana e-Afrika kube umqansa. Uma kukhona izingqinamba ekutheni sihoshelane kwezohwebo kungacishe kusho ukuthi umnyombo usasele futhi udinga ukufakelwa izibuko, ilapho ke umuntu omusha onamathuba masha nolwazi olusha angena khona
Nakuba izwekazi i-Afrika linezizinda zomnotho ezahlukisiwe nezibekelwe ukuthi uhwebo lube lula kulezo zizinda ngisho kunzima e-Afrika yonke kepha nazo lezo zizinda azibukeki ziphumelela ngokugcwele. Kuze kube manje i-Afrika inezizinda zomntho eziyisishiyagalombili ezisebenza ngaphansi kwayo inhlangano enkulukazi i-African Union
Phakathi kwale zizinda kubalwa iSouthern African Development Community (SADC); i-Economic Community of West African States (ECOWAS) kanye ne-Arab Maghrab Union (AMU) ukubalula ezimbalwa. Amazwe amaningi akhele iNingizimu ye-Afrika angaphansi kweSADC. Umongo wazo zonke lezi zizinda zohwebo ukuthelelana amanzi kwezepolitiki kanye nomnotho ukuze amazwe angaphansi kwazo ezokhula futhi asebenze ndawonye.
Lezi zizinda zisebenza ngaphansi kwenhlangano enkulu yase-Afrika i-African Union (AU) nokuyiyona ehlanganisa wonke amazwe ase-Afrika. Umbono kanye nezinhloso zokusa i-Afrika phambili zidingidwa khona kwi-African Union. Nakuba izizinda zomnotho esizibalulile zibuye zishicilele imigomo yezohwebo nokudlelana kwezomnotho ngaphakathi kwazo kepha okuningi abakwenzayo akuphambani nezifi so ze- African Union.
Komunye umhlaba nakwelinye izwe bekumele engabe akukho ukuphambana okuningi e-Afrika ngoba kunalezi zinhlaka zokuhlanganyela kepha okwenzekayo kubukeka kuhluka. Ngenxa yokuhlukana kwamandla omnotho emhlabeni jikelele i-Afrika ibukeka ingakwazi ukwesekana yodwa ngokwanele ezinqumweni ezithile zomnotho.
Ukuze sifi nyelele ekufezekiseni iphupho le-Afrika kumele siqale ngokuzihlupha nge-Afrika ikakhulukazi uma sizibiza ngosomabhizinisi. Kumele umuntu omusha osebhizinisini azi ukuthi izwe lakhe linazivumelwano zini namanye amazwe ase-Afrila kwezomnotho. Kumele futhi siwazi amagalelo alelo nalelo lizwe lase-Afrika ukuze kucace bha ukuthi ngobani abanolwazi kuphi ukuze ukuhwebelana kube lula.
Ngaphambi kokuthi siye emazweni aseNtshonalanga ukuyofuna izimpendulo zokukhulisa umnotho wethu ontulayo kungakuhle sibheke ekhaya kuqala. Uma futhi singaya emazweni ongaphandle siyimbumba njenge-Afrika kuningi esingakuzuza kunokuba sihamba ngokwehlukana. Ziningi izivumelwano kanye nezinqubomgomo esezishicileliwe ngaphansi kwezizinda eziyisishiyagalombili ezikhona e-Afrika kanye nangaphansi kwenhlangano i-African Union.
Ubuholi obusha: Izibophezelo zeNingizimu Afrika njengoSihlalo we-African Union
Ukusebenza nokufezeka kwazo akuncikile kuphela kuHulumeni kepha kuncike ekutheni osomabhizinisi abancane bayakuqonda yini ukuthi zisho ukuthini kanye namathuba eza nalezi zivumelwano.
Ekugcineni zimele ukwenza uhwebo lube lula nokungasho ukuthi uma ungum-Afrika ungakwazi uhweba namaye amazwe ase-Afrika kalula kunokuya emazweni aphesheya kwezilwandle. Kuze kube manje kubukeka kungamazwe aseNtshonalanga kanye nase-USA athola uhwebo olukhulu kanye nenzuzo enkulu emazweni amaningi ase-Afrika kunokuthi kube ngamanye amazwe ase-Afrika ahweba ngaphakathi e-Afrika.
Muva nje amazwe amaningi ase- Afrika aseshicilele isivumelwano sokuhwebelana se-Afrika yonkana esaziwa nge-African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Kulindeleke ukuthi i-AfCFTA ikwazi ukukhulisa ubudlelwano bokuthenga kwamakhasimende kanye nokuhweba kwamabhizinisi kube ngaphezu kwamaphesenti angamashumi amahlanu (50%) phakathi kwamazwe ase-Afrika yonkana.
Ngaphandle kwezigqinamba ezikhona kulezi zivumelwano nokusilela emuva kwamanye amazwe kuyacaca ukuthi ziwumkhombandlela obalulekile kulabo abafuna amathuba e-Afrika futhi abangama-Afrika amahle!
nguGugulethu Xaba Nov 14, 2019